Proform Power 995c Treadmill $ 999 oo leh Lacag Bixin ah - Lacag Dib u Furan
Home » Amazon » Proform Power 995c Treadmill $ 999 iyada oo bilaash ah
Dib-u-bixinnada fayadhowrka waxaa laga helaa Heshiiska Treadmill Profit Amazon
Iibso Xakamaynta Awoodda 995c Treadmill ee Kaliya $ 999 leh Boostada BILAASH AH
Keydso $ 1000 Lacagta Asturta Asalka ah ee $ 1999
The ProForm Power 995c waxaa lagu qiimeeyaa "Best Buy Buy" oo ka yimaada Treadmill Doctor. Waxay leedahay 3.0 CHP Mach Z ganacsi iyo mootada. Waxay leedahay 0-12 MPH xakamaynta xawaaraha, 0-15% qalab, waxayna ku habboon tahay ikhtiyaarka Ifit Live Live
Ku saabsan Ifit Live:
IFit Technology waxay dib u soo celinaysaa hawlahaaga mashiinka ah ee raadinta jimicsiga, farsamooyinka ay ku shaqeynayaan Khariidadaha Google, tababarka dhacdooyinka, ciyaaraha fiidiyowga, iyo in kale. Awoodda 995c waxay ubaahan tahay a iFit Module WiFi taas oo si gooni ah loo iibin karo. Shabakadda guryaha ee guriga ayaa lagama maarmaan u ah inay ku xirmaan astaantaada iFit. * Google iyo Khariidadaha Google waa calaamadaha ganacsiga ee Google, Inc. *
Xirmada Awooda Awoodda 995c ee treadmill suunku wuxuu cabbiraa 20 "x 60". Awoodda 995c waxay leedahay 30 oo lagu dhejiyay barnaamijyada tababarka sidaa daraadeed waxaad yeelan doontaa noocyo kala duwan oo ah jimicsi si aad u doorato. Waa meel badbaado leh oo si sahlan u duubaya kaydinta. Waxay leedahay hannaan culus oo si sahlan u fudud, taas oo sidoo kale hoos u dhigeysa culeyska dhabarkaaga markaad laabto. Tamarta 995c Treadmill waxay leedahay miisaanka 350 lb.
Caymiska Shirkadda Awoodda 995c ee 3c waa qaybaha sanadaha 1 iyo sanadka XNUMX ee shaqada.
Ku iibso Awooddaada ProForm 995c Treadmill Maanta ka soo Amazon
* Qiimaha $ 999.99 ee Proform Power 995c Treadmill waa mid sharci ah oo ka mid ah 2 / 10 / 14 11: 41 PM PM. Sicirka qiimaha iyo helitaanka waa sax marka loo eego taariikhda / wakhtiga la tilmaamay iyo in la bedelo. Qiimaha iyo helitaanka macluumaad kasta oo lagu soo bandhigay Amazon.com xilliga iibsigu waxay khuseysaa iibsashada alaabtan
Isku qor Diiwaanka Gaiam Email & Ka hel 15% OFF!